Banyere Anyị - Shandong QianBaidu Machinery Co., Ltd
Tọrọ ntọala na 2000, Shandong QianBaidu Machinery Technology Co., Ltd. bụ a maara nke ọma otu ụlọ ọrụ na Shandong Province, tumadi aku na mmepụta na R & D nke buru ibu ma na-ajụ-sized ụlọ elu cranes, ihe Ịgwakọta osisi, mpụga mgbidi ewu cranes , ewu nchekwa ihe na soda ash mmepụta e. Afọ nke mmepe, na ụlọ ọrụ onye ndú.
Ebe ọ bụ na oruru nke ụlọ ọrụ site na nlezianya management na pragmatic azụmahịa nkà ihe ọmụma, na ndị ụlọ ọrụ iru a elu ịtụkwasị obi. The ụlọ ọrụ ugbu a nwere Ministry of ọrụ, ndị Ministry of Technology, Materials Department, na Legal Department, ndị Ministry of Finance, ndị Ministry nke echichi, mmezi ngalaba.
Ngwaahịa na-tumadi exported na Europe na United States, Southeast Asia, South Korea, Japan na mba ndị ọzọ, ụlọ ọrụ ike oru ike, ọkachamara nche mbụ na klas, anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị ahịa n'otu.
Na enterprise mmụọ nke "ziri ezi, humbleness, ọhụrụ na mma" dị ka isi ụkpụrụ nke mmadụ, ụlọ ọrụ agbaso ahịa nkà ihe ọmụma na "ọdịdị nke taa bụ echi ahịa, ịtụkwasị obi nke na enterprise bụ intangible ahịa , na afọ ojuju nke ọrụ bụ ebighi ahịa ", The ịchụso" ezi okwukwe ahụ zuru okè ọrụ, otu narị percent ahịa afọ ojuju. " Site na nkà mmụta sayensị management, irè akara, àgwà ọrụ na echesinụ style nke nkwekọrịta na pụrụ ịtụkwasị obi merie ọtụtụ ndị ọrụ otuto na otuto.